Waa sidee isdhexgalka Shiineeska iyo Afrikaanka? - BBC News Somali
Waa sidee isdhexgalka Shiineeska iyo Afrikaanka?
Image caption Xu Jing iyo Henry Rotich ayaa is jeclaaday toban sano kahor
"Waynu is jeclaannay balse markii hore aad bey u adkeyd,," Xu Jing ayaa sidaas sheegtay iyadoo ku sugan hoteelka Fairmont ee magaalada Nairobi.
"Qoyskeygu gebi ahaanba wax badan kama aysan aqoon Africa. Xitaa hore uma aysan arag qof Kenyan ah marka aad bey u walaacsanaayeen."
Henry Rotich - oo ah qofka Kenyan-ka ah ee ay su`aashu ku godan tahay - ayaa qudhiisu walbahaarsanaa.
Lammaanaha ayuu xiriir dhex maray kaddib markii Henry loo diray Shiinaha si uu u soo barto luqadda Mandarin, taas oo qayb ka ahayd shaqo uu dowladda u hayay.
Waxay ku qaadatay dhowr toddobaad si uu u horumariyo luqaddiisa, si ay ugu suurto gasho la kulanka aabbaha Jing, oo ay casuumaad qado ku kulmeen si uu labadooda isu siiyo.
"Aabbaheed wax badan ma uusan oran, sidaa darteed aad baan uga walaacsanaa waxa uu ku fekerayay, haddii uu ka helay iyo haddii kaleba cuntadii aanu ku casuunnay," ayuu Henry yiri.
Fahankiisa luqadda Mandarin waxay ahayd mid wanaagsan: toban sano kaddib, lammaanaha ayaa u soo wareegay caasimadda Kenya, waana waaliddiin isu dhalay labo carruur ah.
Jing ayaa haatan luqadda Mandarin ka dhigta Confucius Institute oo ku yaalla jaamacadda Nairobi.
qoysaskooda ayaa sawir ka bixinaya xiriirka sii kobcaya ee u dhexeeya Shiineeska iyo Kenyanka - tan oo ay dhidibbada u aastay maalgashiga baaxadda leh ee uu Shiinuhu ku sameysanayo Kenya.
Wuxuu sidoo kale maalgashiga Shiinaha ka muuqdaa qaaradda Afrika. Sanadkii 2000, ganacsiga Shiinaha iyo Afrika ayaa gaaray $10bn (£7bn). Tiradaas ayaa haatan la rumeysan yahay inay gaartay $300bn.
Waxa leysla dhex marayo
Sheekada Jing iyo Henry ayaa ah mid guuleysatay, balse xiriirka labadooda u dhaxeeya ma ahan mid mar walba hagaagsan.
Image caption Shiineeska ayaa balaayiin ku maalgashaday mashaariicda dhismaha Afrika
Waddada Thika Road, oo ah jidweyne uu dhisay Shiinaha, kaas oo isku xira Nairobi iyo magaalada warshadaha caanka ku ah ee Thika, waxaa leysla dhex marayaa in waxa loogu yeero "Carruurta Thika" ay badan yihiin.
Sida la leeyahay, shaqaalaha Shiineeska ee dhismaha ka shaqeeya ayaa boqollaal carruur ah ka dhalay haweenka halkaasi ku nool, kahor inta aysan ka dhuumman.
Warbaahinta ayaa sidoo kale baahisay sheekada gabar iskuulley ah, oo uu uureeyay mid ka mid ah shaqaalaha dhismaha, kaas oo ay ka soo dhex saari weyday boqollaalka kale ee dhismaha ka shaqeeya.
Iyadoo ay taasi jirto - waxaa haddana jirta hees ku saabsan arrintaas - inta badan dadka Kenyanka ah weligood ma aysan helin wax caddeynaya jiritaanka carruurtaas.
Balse taasi kama aysan hor istaagin dadka qaar inay rumeystaan waxa leysla dhex marayo.
"Waxaan dhihi karaa waxaan arkay ilaa 20… waa wax aad qarsoodi u ah maaddaama inta badan aabbayaasha Shiineeska ah aysan dalka sii joogin," Thatcher, oo ah turjumaan ku nool meel u dhow Thika Road, ayaa sidaasi inoo sheegay.
"Waxaan u maleynayaa in muddo ku siman 15 ama 20 sano, marka carruurtan ay weynaadaan oo ay aadaan jaamacadaha, in aan markaas kala ogaan doonno xaddiga iyo waxa runta ka ah arrintan."
'Xilliga Afrika wuu is beddelayaa'
Aabbayaasha baxsanaya kama aha dhibaato inta badan guryaha Shiineeska iyo Kenyanka, dabcan.
Jing - oo ku soo garaadsatay siyaasaddii Shiinaha ee halka canug - waa tirada xubnaha qoyska waxa mararka qaar iyada la ah arrin weyn.
Image caption Xildhibaanad Hong Kong ka soo jeedda oo booqatay Kenya si ay gacan uga geysato la dagaallanka la bixidda fool-maroodiga
"Waxaan lahaan jirnay qoys ballaaran, waxaana marar badan isku imaan jiray qoysas ballaaran si ay waqtiga iskula qaataan," ayuu yiri Henry. "Qaraabadeenna ayaa noo imaan jiray si ay inala joogaan muddo dheer.
"Shiinaha inta badan waxaasi kama jiraan. Qoyska ayaa ku soo booqan kara muddo kooban mana filayo in isu dhowaanshaha qoysas ballaaran ay isku mid ka tahay."
Waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho kale. Jinhua Lu, waa la taliye shirkadaha Shiineeska kala taliya sida ugu wanaagsan ee ay uga howlgali karaan Kenya, wuxuu qabaa in weli ay jiraan caqabado kale.
"Ma jecli inaan wax guud ka dhigo balse waxaa jira in dadka Kenyanka ah ay yihiin qunyar socod ," ayuu yiri. "Waxay jecel yihiin inay nolosha ku raaxeystaan waxayna leeyihiin dareen bulshonnimo oo aysan Shiineesku qabin.
"Shiineeska halkan ayay yimaadaan waxayna un maanka ku hayaan hadafka ugu dambeeya. Waxay shaqeeyaan saacado badan - waxay qaataan fasaxyo aad u yar waxay xitaa shaqeeyaan dhammaadka toddobaadyada si ay u dhammeystiraan mashruucooda sida ugu dhaqsiyaha badan."
Waa wax ay Jing iyo Henry qirsna yihiin.
"Haa waa run in Kenyaanku ay jecel yihiin inay arrimahan ka nastaan balse hadda way is beddelayaan …arrintan ku aaddan waqtiga Afrika way is beddeleysaa. Heerka horumarku wuu sii kobcayaa sidoo kale dadkuna waxaa horyaalla wax badan oo ay qabtan - marka waxaa noo yaalla wax baan oo aan ku qabanno waqtigeenna."
Iyadoo ay Kenyan imaanayaan Shiinees badan si aan hore u dhicin, waxaa jira dadaallo badan oo lagu xallinayo kala duwanaanshaha dhaqanka.
Confucius Institute - oo ah halka ay Jing ka shaqeyso - wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay maalgeliso dowladda Shiinaha kaas oo la doonayo inuu xiriir wanaagsan ka dhex Shiineeska iyo Kenyaanka.
Kenyaanka halkaas wax ka barta, waxay rajadoodu tahay in shaqooyin wanaagsan ay ka heli doonaan shirkadaha Shiineeska. Shiineeskuna waxay ku hanweyn yihiin in dalkoodu uu qorsheynayo in xiriir adag uu la yeesho Kenya muddo fog.
Balse in hooyo Shiinees ah lagu arko albaabbada iskuullada waa arrin weli lala yaabo.
Image caption Madaxweynaha Kenya Uhuru Jenyatta iyo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping ayaa doonaya inay sii wadaan xiriirkooda
"Dhammaan hooyooyinka kale waxay doonayaan inay la hadlaan Xu dhammaan carruurtuna iyagoo boodboodaya ayay leeyihiin: 'Waa hooyada Shiineeska ah!'" ayuu yiri Henry.
"Carruurteennu waxay u ek yihiin sida Kenyaanka caadiga ah sidaa darteed markaanu is raacno, dadku waxay is weydiiyaan luqadda ay ku hadlayaan?
"Markaan iraahdo: 'Shiinees', waxay dhahaa… 'Yaah?! Oo waa ku hadli karaan Shiinees!' aad bey ugu farxaan qof walbana wuuxu doonayaa inuu su`aalo na weydiiyo oo uu saaxiib nala noqdo."
Sida ay qabto Jing, waxay Kenya u aragtaa mustaqbalkeeda.
"Waan u xiisay Shiinaha balse Kenya ayaa hadda ah gurigeyga," ayay tiri. "Inta badan Shiineeska halkan yimaada way jecel yihiin dalkan waxaana u maleynayaa in badankood ay halkan sii joogi doonaan muddo dheer," ayay hadalkeeda ku soo gabagabeysay.